19 Oct 2018 . 3:33 PM
ကင်းမြီးကောက်တစ်ကောင်ရဲ့ အဆိပ်ကနေ ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီ ပိုက်ဆံရှာလို့ရတယ်ဆိုရင် လက်ခံမှာလား? ဒီအလုပ်က အသက်ရင်းပြီး ရှာရတယ်ဆိုမယ့် အချီကြီးမိသွားပြီးရင်တော့ သူဌေးဖြစ်မယ့်ကိန်းပါ။
Extracting Scorpion Venom
ဘာလို့လဲဆိုရင် Deathstalker အမည်ရတဲ့ ကင်းမြီးကောက်အဆိပ်ဟာ အဆိပ်အပြင်းဆုံးဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးအဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီ ကင်းရဲ့အဆိပ် ၁ မီလီဂရမ်ဟာ ဒေါ်လာ ၁၃၀ အထိ ပေါက်ဈေးရှိတယ်ဆိုမယ့် စီးပွားဖြစ်တွက်ပြတယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့။
Deathstalker အဆိပ်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တချို့နဲ့ ပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်းရှိပြီး ကုထုံးအနေနဲ့အသုံးဝင်လာတာကြောင့် သုတေသနလုပ်ဖို့ လိုအပ်လာတာပါ။ နောက်ပြီး Deathstalker အဆိပ်မိသွားရင်လည်း ဖြေဆေးမရှိတဲ့အတွက် တော်ရုံဖမ်းဖို့လက်မရဲကြပါဘူး။
နောက်ပြီးအပ်တစ်ချောင်းစာပဲထွက်တဲ့ Deathstalker အဆိပ်က ပမာဏအရမ်းနည်းတာမလို့ Research လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် များများလိုအပ်မှာပါ။ အခုလို ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာကို Venomtech သုတေသီ Steve Trim က
“Deathstalker အဆိပ်ပြင်းမပြင်း သိတဲ့လူတိုင်း မဖမ်းရဲကြဘူး၊ နောက်ပြီးဒီကောင့် အဆိပ် (Venom) ထဲမှာ ကင်ဆာဆဲလ်နဲ့သွားပေါင်းနိုင်တဲ့ Chlorotoxin လို Compound ပါတယ်။ Kaliotoxin ခေါ်တာပေါ့။ ဒီကောင့်ကို အရိုးကင်ဆာကုသဖို့ ကျွန်တော်တို့ Lab ခန်းက ကြွက်တွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်တယ်၊ အဓိကကင်ဆာဆဲလ် ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲ Deathstalker အဆိပ်နဲ့ သိရှိနိုင်ပြီမလို့ လူတွေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်လို့” ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ အဆိပ်ပြင်းသလောက် အသုံးဝင်လာတဲ့ Deathstalker Venom က အခုဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးလာမယ့် အနာဂတ်ဆေးပညာအတွက် Pioneer လို့ပဲပြောရမလား ဦးနှောက်ကင်ဆာဆဲလ်နေရာကိုပါ သိရှိနိုင်ပါပြီ။ လေ့လာချက်တွေအရ ငှက်ဖျားရောဂါကိုတောင် တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်ဆိုပါတယ်။
ကငျဆာကုထုံးမှာ အသုံးတှငျကယျြလာတဲ့ $39 သနျးတနျ ကငျးမွီးကောကျအဆိပျ
ကငျးမွီးကောကျတဈကောငျရဲ့ အဆိပျကနေ ဒျေါလာ သနျးနဲ့ခြီ ပိုကျဆံရှာလို့ရတယျဆိုရငျ လကျခံမှာလား? ဒီအလုပျက အသကျရငျးပွီး ရှာရတယျဆိုမယျ့ အခြီကွီးမိသှားပွီးရငျတော့ သူဌေးဖွဈမယျ့ကိနျးပါ။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ Deathstalker အမညျရတဲ့ ကငျးမွီးကောကျအဆိပျဟာ အဆိပျအပွငျးဆုံးဖွဈသလို ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးအဆိပျဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ဒီ ကငျးရဲ့အဆိပျ ၁ မီလီဂရမျဟာ ဒျေါလာ ၁၃၀ အထိ ပေါကျဈေးရှိတယျဆိုမယျ့ စီးပှားဖွဈတှကျပွတယျမထငျလိုကျပါနဲ့။
Deathstalker အဆိပျဟာ ကငျဆာဆဲလျတခြို့နဲ့ ပေါငျးစညျးနိုငျစှမျးရှိပွီး ကုထုံးအနနေဲ့အသုံးဝငျလာတာကွောငျ့ သုတသေနလုပျဖို့ လိုအပျလာတာပါ။ နောကျပွီး Deathstalker အဆိပျမိသှားရငျလညျး ဖွဆေေးမရှိတဲ့အတှကျ တျောရုံဖမျးဖို့လကျမရဲကွပါဘူး။
နောကျပွီးအပျတဈခြောငျးစာပဲထှကျတဲ့ Deathstalker အဆိပျက ပမာဏအရမျးနညျးတာမလို့ Research လုပျဖို့အတှကျဆိုရငျ မြားမြားလိုအပျမှာပါ။ အခုလို ဆေးဖကျဝငျတယျဆိုတာကို Venomtech သုတသေီ Steve Trim က
“Deathstalker အဆိပျပွငျးမပွငျး သိတဲ့လူတိုငျး မဖမျးရဲကွဘူး၊ နောကျပွီးဒီကောငျ့ အဆိပျ (Venom) ထဲမှာ ကငျဆာဆဲလျနဲ့သှားပေါငျးနိုငျတဲ့ Chlorotoxin လို Compound ပါတယျ။ Kaliotoxin ချေါတာပေါ့။ ဒီကောငျ့ကို အရိုးကငျဆာကုသဖို့ ကြှနျတျောတို့ Lab ခနျးက ကွှကျတှနေဲ့ စမျးသပျကွညျ့တယျ၊ အဓိကကငျဆာဆဲလျ ဘယျနရောမှာရှိနလေဲ Deathstalker အဆိပျနဲ့ သိရှိနိုငျပွီမလို့ လူတှနေဲ့စမျးသပျကွညျ့ခငျြတယျလို့” ပွောဆိုထားပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ အဆိပျပွငျးသလောကျ အသုံးဝငျလာတဲ့ Deathstalker Venom က အခုဆိုရငျ ဖှံ့ဖွိုးလာမယျ့ အနာဂတျဆေးပညာအတှကျ Pioneer လို့ပဲပွောရမလား ဦးနှောကျကငျဆာဆဲလျနရောကိုပါ သိရှိနိုငျပါပွီ။ လလေ့ာခကျြတှအေရ ငှကျဖြားရောဂါကိုတောငျ တိုကျဖကျြနိုငျတယျဆိုပါတယျ။